Poidełko Point Barkadda Biyaha • Ilkay • Cabbitaannada • Meelaha biyaha la cabo • Zdroje
Barta Biyaha oo ah wakiilka keliya Hagaag Poland gudaheeda waxaa laga helaa dhalo biyo iyo ilo biyo cabitaanka guga iyo ilaha biyaha la cabo, ee loogu talagalay iskuulada iyo jaamacadaha, dhismayaasha xafiisyada, xarumaha dukaamaysiga, dhirta waxsoosaarka, naadiyada jimicsiga, xarumaha isboortiga, garoomada diyaaradaha, xarumaha, xarumaha caafimaadka, hoolalka madadaalada, tiyaatarada, shineemooyinka, xafiisyada gobolka, jardiinooyinka, garoonada ciyaarta, balanqaadyada, iwm.
Soo dejiso buugga macluumaadka "
Shirkadaha Elkay waxay xaruntiisu yihiin Downers Grove, Illinois, oo leh tas-hiilaad wax soo saar gudaha Mareykanka, iyo howlo caalami ah oo ka socda Shiinaha iyo Mexico oo u adeegaya suuqyada adduunka.
Muuqaal cabbitaan oo laba-shaqo ah - LZS8WSS2K model
Moodhkan ayaa isku daraya saldhiga dhalada biyaha iyo weelka biyaha lagu quudiyo si aad harraad ugu harraadiso adiga oo aan adeegsan maraakiib dheeri ah. Waa xalka ugufiican ee iskuulada, jaamacadaha, xarumaha dowliga ah oo ay kujiraan naadiyada jimicsiga, xafiisyada iyo isbitaalada.
Isla mar ahaantaana, waxay soo bandhigaysaa falsafad cusub oo cilmiga nafsiga ah iyada oo loo sheegayo isticmaaleyaasha xaddiga dhalada caagga ah ee la keydiyey iyada oo ay ugu mahadsan tahay qaabkan isticmaalka biyaha.
Qalab cagaaran - Wuxuu muujiyaa tirada dhalada caagga ah ee la keydiyey.
Kormeeraha shaashadda Sawirka (Moodooyinka leh shaandhada kaliya) - Cagaar, Jaale, iyo Laanjooyinka casaanka waxay muujinayaan xaaladda filterka.
Laminar durdur - Xaraashka dib loo soo celiyo - waxay hubisaa socodka qumman iyo kala firidhsan ugu yar
biyo, 4-6 l / min.
Tooska dabacsan - Flexi-Ka ilaaliya dhaawacyada isticmaala. Waxay leedahay dahaar ka hortagaysa koritaanka sheyga.
Firfircoonaanta dareemayaasha elektaroniga ah - Xiriir la'aan iyo qalliin nadaafadeed oo otomatik looga demiyo 20 ilbiriqsi oo dhaqdhaqaaq la'aan ah.
Iskuulada iyo kuliyadaha
Naadiyada jimicsiga iyo waxyaabo kaloo badan
Moodel LZS8WSS2K - Qalabkan wuxuu ka kooban yahay 60% waxyaabaha dib loo warshadeeyo, wuxuuna ku habboon yahay adeegsiga dadka naafada ah, carruurta iyo dadka waaweyn ee kursi curyaanka ah.
Muuqaal gaar ah oo leh miis garaac ayaa ku ogeysiinaya adeegsadaha tirada dhalada xayawaanka la badbaadiyey, sidaas awgeed iyadoo la waafajinayo isbeddelada dabiiciga ah ee hadda jira.
Waxaa ku qalabeysan shaandho tayo sare leh (macdanta "lead, chlorine, dareeraha adkaha ah iyo dhadhanka iyo udugga) oo ku filan 12.000 litir oo biyo ah iyo qaboojiye.
Marka loo adeegsado xarumaha iskuulka, waxaa lagu qalabeyn karaa qalab gaar ah, tayo sare leh, dabacsan oo Fudud Flex kaas oo caruurta ka difaacaya dhaawacyada. Bixiyeyaasha buuxinta dhalooyinka waxaa si toos ah u keenaya dareeraha.
* Waa suurta gal in lagu sameeyo wax sumad ah miis aluminium ah.
Khamriga - Moodeelka EZS8S
Sida moodeelada kore, waxaa lagu qalabeeyay qaboojiye, filter tayo sare leh ("lead, kolorine, dareeraha waxyaabaha kufilan iyo dhadhanka iyo udugga) oo ku filan 12.000 litir oo biyo ah.
Marka loo adeegsado xarumaha iskuulka, waxaa lagu qalabeyn karaa qalab gaar ah, tayo sare leh, dabacsan oo Fudud Flex kaas oo caruurta ka difaacaya dhaawacyada.
Ku habboon isticmaalka naafada, carruurta iyo dadka waaweyn ee kursi curyaanka ah.
Khamriga - dhigay LZSTL8WSS2K
Laba gole oo ka kooban moodooyinka kor lagu soo sheegay ee loogu talagalay dadka waaweyn iyo carruurta.
Bixiyeyaasha buuxinta dhalooyinka waxaa si toos ah u keenaya dareeraha.
Rugaha buuxinta dhalada ku yaal derbiga
• batoonka lagu riixay
• Qalabka Tilmaamaha Cagaarka cagaaran
• Nidaamka bullaacadda iyo wax soo saarkeeda ayaa la tirtirayaa
biyo haray oo ku haray aaladda
• Waxaa loo isticmaalaa in lagu buuxiyo: dhalooyinka biyaha, dhalooyinka, maafiyada
• loogu talagalay rakibo meelaha adag
helitaanka awooda korantada
• Bandhiga Tricker Green waxaa ka shaqeeya 3 baytariyada AAA ah
• ku habboon xafiisyada iyo goobaha shaqada
• Waxaa ku shaqeeyey dareemayaal aan la xiriiri karin
• Awooda buuxinta sare ee 4,5-6 l / min
• xiritaan otomaatig ah ka dib 20 ilbiriqsi oo aan shaqeynaynin
Dadka cabba makaanikada
Cab cabitaan ka samaysan bir aan nadiif ahayn. Qaabka qaaska ah ee maddiibadda ayaa yareyn kara kala-baxa. Fal-isu-celin kiciya oo u adkaysata adeegsiga culus ee aan u baahnayn qabasho ama maroojin. Ku hagaajinta dhererka jetka iyada oo loo marayo god khaas ah badhanka, iyada oo aan la kala soocin
Cab cabitaan ka samaysan bir aan nadiif ahayn. Qaabka qaaska ah ee maddiibadda ayaa yareyn kara kala-baxa. Fal-isu-laabasho oo u adkaysata adeegsiga culus ee u baahan tallaabo ama maroojin. Ku hagaajinta dhererka jetka iyada oo loo marayo god khaas ah badhanka, iyada oo aan la kala soocin Khamriga waxaa ku qalabeysan boodhadh difaac leh.
Aalkolada - moodooyinka u adkaysanaya vandal
Moodooyin taxane ah oo leh qaab dhismeed aad u waara oo laga sameeyay tayo sare oo 2 mm qafiif ah oo ka samaysan bir bir adag. Waxaa lagu rakibay koronto-la'aan, sifo aad u waara oo ka samaysan naxaas chrome-steel ah.
Vandal u adkaysata, is-xidhashada, badhanka xakameyn la'aanta oo leh furitaan lagu xakameeyo dhererka jet-ka.
Waxay u adkeysan kartaa culeys toosan oo 250 kg ah. Ansixinta dadka naafada ah. Kaamil ah iskuulada, xarumaha wax gadashada, daryeelka iyo xarumaha waxbarashada.
Vandal-proof saldhiga dhalada biyaha ee isku dhafan oo dhalada biyaha ah. Waxaa lagu heli karaa miiraha iyo qaboojinta.
Miraha cusub ee loo yaqaan 'Green Tricker counter' wuxuu muujinayaa inta dhalo caag ah oo aan qashin aheyn oo deegaanka ilaaliya.
Moodooyin taxane ah oo leh qaab dhismeed aad u waara oo laga sameeyay tayo sare oo 2 mm qafiif ah oo ka samaysan bir bir adag.
Waxaa lagu rakibay koronto-la'aan, sifo aad u waara oo ka samaysan naxaas chrome-steel ah. Vandal u adkaysata, is-xidhashada, badhanka xakameyn la'aanta oo leh furitaan lagu xakameeyo dhererka jet-ka.
Cabitaanka Swirlflo® - Foom casri ah
Kuwa ugu horumarsan marka loo eego qaababka cabitaanka ka yimid taxanaha SWIRFLO, oo ka samaysan bir tayo sare leh, oo leh darbi gidaar ah iyo badhan dib-u-soo-noqosho.
Ansixinta dadka naafada ah. Waxaa loo hibeeyay xarumaha caafimaadka, garoomada diyaaradaha, saldhigyada iyo tas-hiilaadka kale ee dadweynaha iyo xafiisyada.
Isku-dhafka dhalada biyaha ee isku-dhafan oo leh weel casri ah oo SWIRFLO ka sameysan bir aan tayo fiican lahayn, oo leh miiraha, oo aan qaboojin, oo leh darbi gidaar ah iyo batoonka soo laabashada ballaaran.
Miraha cusub ee loo yaqaan 'Green Tricker counter' wuxuu muujinayaa inta dhalo caag ah oo aan qashin aheyn oo deegaanka ilaaliya. Ansixinta dadka naafada ah.
Waxaa loo hibeeyay xarumaha caafimaadka, garoomada diyaaradaha, saldhigyada iyo tas-hiilaadka kale ee dadweynaha iyo xafiisyada.
Khamri cabitaan dhinacyada jilicsan - qaab casri ah
Laba cabbitaan oo cabitaanno ah oo loogu talagalay carruurta iyo dadka waaweyn, oo laga sameeyay bir aad u tayo sareeya, oo leh darbi ilaalin leh muuqaal qurxoon iyo qaab casri ah.
Ansixinta dadka naafada ah. Ku habboon xarumaha dadweynaha, garoomada diyaaradaha iyo saldhigyada.
Aalkolo ka sameysan bir aad u tayo sareeya, oo leh miiraha iyo qaboojiye, oo leh darbi ilaalin leh muuqaal qurux badan iyo qaab casri ah.
Cabitaannada iyo ilaha biyaha - bannaanka
Saldhigyada dhalada biyaha iyo kuwa cabba - ENDURA
Saldhigga dhalada biyaha ee derbiga lagu dhajiyay, vandal-proof, oo leh qaab waara, oo laga sameeyay bir qabow, oo dhumucdiisuna tahay 4,5 mm.
Powder dhammeeya, cimilo u adkaysata. Badhanka hore ee fududahay in la isticmaalo
Ku beddelashada biyo yarayn kara kala-baxa oo leh awood ah 4,5-6 l / min. Ku habboon meelaha madaddaalo.
Waxaa loo sharciyeeyey dadka naafada ah. Waxaa lagu heli karaa nooca qabowga u adkaysta - waalka waxaa intaas dheer in la bixiyo.
Saldhigga dhalada biyaha leh cabbitaan iyo baaquli eeyaha, vandal-proof, oo leh qaab waara, oo laga sameeyay bir qabow, oo dhumucdiisuna tahay 4,5 mm.
Baaquli cabitaanka banaanka - isku darka dabiiciga
Boorso cabitaan ah oo ka kooban isku-darka dabiiciga ah ee la xoojiyay - vibro solid. Aad u adkaysi u xaaladaha cimilada. Waxyaabaha kale waxay ka samaysan yihiin bir aad u tayo sareeya. Kuntuwaalka Vandal u adkaysanaya. Waxaa loogu talagalay dadka naafada ah. Waxaa lagu heli karaa nooca qabowga u adkaysta - waalka waxaa intaas dheer in la bixiyo.
Khamri cabista lugta ah oo ka kooban isku-darka dabiiciga ah ee la xoojiyay - vibro solid. Aad u adkaysi u xaaladaha cimilada. Waxyaabaha kale waxay ka samaysan yihiin bir aad u tayo sareeya. Kuntuwaalka Vandal u adkaysanaya. Waxaa lagu heli karaa nooca qabowga u adkaysta - waalka waxaa intaas dheer in la bixiyo.
biyo nadiif ahbiyo bilaash ahilo biyoodilaha biyaha la cabboilaha magaaladapitnikpitnikibarkado biyocabbayaashakhamriga qaybiyahadadka cabba elkaycabitaanka birtasoo saareyaasha khamrigadadka cabba gudahacabitaannada dibeddacabdikhamriga iskuulkatoosan tubbadabiyo loogu talagalay iskuuladabiyaha tuubadabiyo nadiif ahgugaisha biyaha la cabogugabiyo la cabbo guga
Saldhigyada jeermiska lagu daarto